Orinasa fambolena solika ilaina indrindra Aromatherapy Rosemary Tena ilaina ary mpanamboatra | HaiRui
Menaka tena ilaina amin'ny aromatherapy Rosemary fikarakarana volo
moisturizer, Fanafotsy, famelomana
100% Pure voajanahary
Aromatherapy fikarakarana volo Menaka tena ilaina Rosemary
ranomanitra, famelombelona, ​​fitsaboana
Toerana misy ny orinasa:
azontsika atao ny manamboatra fonosana OEM / namboarina, ny tavoahangy dia vera amber .dia 10ml / 15ml / 20ml / 30ml / 50ml / 100ml / 500ml / 1000ml. afaka manao marika manokana sy boaty fanomezana natokana ho azy izahay. Fonosinay marobe: barika hoditra Aluminium 1 kg; Baoritra 25kg misy kitapo plastika ao anatiny / 25kg / 50kg / 180kg amponga vy nandrisika
Quantity (kilao) 1 - 50 51 - 200 201 - 1000 > 1000
Est. Time (andro) 6 10 15 Hifampiraharahana
Zava-manitra menaka manitra ilaina Rosemary 100% hanitra manitra natueal madio ao anaty boaty fonosana
Ny menaka Rosemary dia nalaina avy tamin'ny Rosmarinus officinalis (fantatra koa amin'ny anarana hoe Rosmarinus coronarium) an'ny fianakaviana Labiatae ary fantatra ihany koa amin'ny hoe incensier. Ity menaka esory manitra malefaka sy madio ity dia tsara hanentanana ny ati-doha, hanatsara ny fahatsiarovan-tena sy ny fahadiovan'ny saina, ary manampy amin'ny karazany maro ny olan'ny vavonin'ny taovam-pisefoana, ny hozatra henjana, ny hatsiaka ary koa ny fampitomboana ny tatavia sy ny tatavia. Izy io koa dia ampiasaina hanatsarana ny fahasalaman'ny volo sy ny hodi-doha.
Ny menaka Rosemary dia mahafinaritra amin'ny fanadiovana ny saina sy ny saina, ary koa ny fanatsarana ny fitadidiana. Manampy amin'ny aretin'andoha, migraines, neuralgia, havizanana ara-tsaina ary faharerahana sy fiasan'ny menaka rosemary manohitra ny otrikaretina sy fivalanana, fanalefahana colitis , dyspepsia, tsiranoka, aretin'aty ary jaundice ary manamaivana ny fanaintainana mifandraika amin'ny rheumatism, aretin'ny vanin-taolana, ny fanaintainan'ny hozatra ary ny gout. Izy io koa dia manampy amin'ny arteriosclerosis, ny palpitations, ny fivezivezena ary ny lalan-drà varika.
Ny toetra diuretic an'ny menaka rosemary dia ilaina amin'ny fampihenana ny fihazonana rano mandritra ny fadimbolana, ary koa amin'ny hatavezina sy cellulite.
Tsara ho an'ny cosmtic sy ny hoditra ary ny volo
Serivisy fonosana samihafa
1. 1-200ml / tavoahangy
2. 1-50kg / barika plastika na / tavoahangy aluminium
3. 180 na 200kg / barika
1. santionany santionany: ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fandoavana
2. ambany 1000kg: 7 andro fiasana aorian'ny fandoavana
3.1000-5000kg: 10-15 andro fiasana aorian'ny fandoavana.
1) Afaka manome costomers amin'ny serivisy fonosana "tokana" isika, avy amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana, fanondranana sns
2) Ny tanjaky ny R&D matanjaka dia mamela ny haitaonantsika amin'ny sehatra mitarika, mandrakizay, ho setrin'izany, hanomezana tolotra tsara kokoa ny mpanjifa.
3) Manana taratasy fanamarinana ISO & SGS izahay izay mamela ny mpanjifa ho afa-po bebe kokoa ary mahazo toky.
4) Mihoatra ny 19 taona ny traikefa fanondranana dia afaka manome serivisy matihanina bebe kokoa amin'ny mpanjifa izahay.
5) Afangaroy sy vokatra samihafa ao amin'ny ONE PCL, ampitomboy ny fahombiazan'ny mpanjifa.
6) Ny foiben-toerany any Shanghai, Shanghai dia iray amin'ny seranana lehibe indrindra manerantany, mety amin'ny fomba amam-panao manome serivisy lozisialy.
7) mpikambana volamena Alibaba miaraka amin'ny antoka azo antoka.
F1: voajanahary sa syntaktika ireo huile essentielle ireo?
A: Ny ankamaroan'ny vokatray dia alaina amin'ny zavamaniry voajanahary, tsy misy solvent plus na fitaovana hafa. Azonao atao ny mividy azy io soa aman-tsara.
F2: Azo ampiasaina mivantana amin'ny hoditra ve ny vokatray?
A: Tsara homarihina tsara fa ny vokatray dia menaka tena ilaina, tokony ho nampiasainao aorian'ny fizarana amin'ny menaka fototra
F3: Inona ny fonosin'ny vokatray?
A: Manana fonosana samihafa ho an'ny solika sy ny zava-maniry azo avy amin'ny zavamaniry izahay,
Amin'ny ankapobeny dia mampiasa kitapo plastika roa heny 25kg an'ny Drum izahay ho an'ny fitrandrahana zava-maniry mafy, OD dia Φ38 × 55cm amin'ny lanjan'ny 3.0kg.
Ho an'ny solika, mampiasa Drum vy milanja 50kg milanja 6,5kg lanjan'ny harato, miaraka amin'ny ODΦ30 × 60cm,
ary 180kg / 200kg. miaraka amin'ny lanja ODΦ57 × 90cm milanja 21kg.
F4: Ahoana no hamantarana ny naoty ny menaka esansiela samihafa?
A: Matetika misy 3 naoty menaka voajanahary voajanahary,
Ny grade A dia ny fahazoana ny Pharma, azontsika ampiasaina amin'ny indostrian'ny fitsaboana ary azo antoka fa misy amin'ny indostria hafa.
GradeB dia ny Kilasy Sakafo, azontsika ampiasaina amin'ny tsiro sakafo, tsiro isan'andro sns.
GradeC dia kilasy Perfume, azontsika ampiasaina amin'ny tsiro sy hanitra, hatsarana ary fikolokoloana ny hoditra.
Previous: Fanasitranana Solosaina HDPE tavoahangy fonosana menaka vovoka chlorophyll
Manaraka: Menaka sakay voajanahary vidiana betsaka
Mpamatsy sinoa fikarakarana hoditra borage essentia ...
mampihena ny menaka Zavamaniry ilaina amin'ny karaoty voajanahary
Vokatra mivarotra mafana ny menaka manitra sy natura ...
menaka fitsaboana volo germ germe oi
Menaka macadamia tonga lafatra amin'ny fanorana, tsara ...
fampiasana menaka manan-danja ny ampongabendanitra amin'ny diffuser ...